7 Safarada Socodka Bilaashka Ah Ee Ugu Fiican Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Safarada Socodka Bilaashka Ah Ee Ugu Fiican Yurub
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 15/11/2020)
Waxaa jira buugaag tilmaame aan la koobi karin oo leh talooyin iyo talooyin nooc kasta oo safar ah oo aad ku aadayso Yurub, iyo nooc kasta oo safar ah. Buugaagtani tilmaamaha waxay ku fiican yihiin barashada taariikhda iyo dhaqanka, laakiin kaama sheegi doonaan talooyinka gudaha ee Yurub. Safarada socodka ee bilaashka ah waa hab fantastik ah oo lagu ogaado Yurub, waxaadna ka heli doontaa magaalo socod bilaash ah socdaal lug ah magaalo kasta oo Yurub ah.
Xidho kabo raaxo leh, maxaa yeelay waxaan uga baxeynaa safarkii a 7 safarada socodka ee ugu fiican Yurub.
1. Dalxiis Socodka Magaalada Bilaashka ah ee Prague
Tilmaame ku hadlaya Ingiriisiga ayaa kugula kulmi doona adiga Hoyga cananaaska magaalada Old for 2.5 saacadood’ socdaal socod ku wareegsan Prague. Waxaad ka bilaabi doontaa safarka lugeynta fagaaraha caanka ah ee Old Town, sii wad Charles Bridge. Laga soo bilaabo xarunta dalxiiska illaa meelaha ugu fiican magaalada ee qadada iyo cabitaanka, Prague wax qabad iyo maya, waxaad safarka ku dhameyn doontaa tanno talooyin ah iyo sheekooyin aadan waligaa ka aqrin doonin buugaagta haga.
Safarka lugta ee magaalada Prague oo bilaash ah ayaa ka mid ah 7 safarada socodka ugu fiican Yurub, hagaha gaarka ah awgood. Waad ka tagi doontaa socdaalka adiga oo faraxsan si aad u ogaato Prague, iyo liis badan oo makhaayado ah oo bixiya menus qado ah oo la awoodi karo. Intaa waxaa dheer, waxaad ku baran doontaa bar-boodka loogu talagalay beerka ugu fiican ee farsamada Czech, iyo aragtiyaha ugu fiican ee layaabka leh ee Prague.
Socdaalka Amsterdam ee socodka bilaashka ah, sidoo kale loo yaqaan 'FreeDam city tamashle socod', waa wax walba oo ku saabsan ogaanshaha iyo ku raaxeysiga magaalada ugu xorta badan Yurub. Socdaalku wuxuu maalin kasta ka amba baxaa goobta kulanka ee Suuqa Kala-iibsiga ee safarka 3-saacadood ah, laga bilaabo halyeeyadii Old Amsterdam ilaa sheekooyinka Amsterdam ee casriga ah iyo kuwa casriga ah.
Inta lagu jiro kuwan 3 saacado xiiso leh, waxaad la kulmi doontaa dadka safarka ah ee adduunka ka socda waxaadna ka baran doontaa siyaasadda daroogada xorta ah ee Amsterdam, nalalka casaanka degmada, siyaasada, iyo taariikhda hagaha’ sheekooyin maaweelo leh. Intaa waxaa dheer, socdaalada socdaalka ee bilaashka ah, waxaad ka heli kartaa tilmaamaha gudaha hagaha safarada maalinlaha ah ee ugufiican Amsterdam iyo guud ahaan Yurub.
3. Socdaalka Socdaalka Magaalada ee Bilaashka ah ee Berlin
Socdaalka magaalada bilaashka ah ee bilaashka ah ee Berlin waa habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo taariikhda magaalada, astaamo, iyo waxyaabaha muhiimka ah dhowr saacadood gudahood. Waa safar socod barasho oo hordhac ah oo lagu tagayo mid ka mid ah magaalooyinka ugu xiisaha badan Jarmalka, oo leh taariikh hodan ah, and politics.
Marka lagu daro waxyaabaha muhiimka ah ee taariikhiga ah, Berlin waxay bixisaa safarro kala duwan oo ka muujin doona Berlin dhinacyo kala duwan; farshaxanimo, cuntada, ama cabitaan’ udub dhexaad. magaalada Asalka ah ee Berlin ee dalxiis socodka ah, waad booqan doontaa 6 astaamaha ugu waaweyn ee magaalada Berlin, oo maqal sheekooyinka ka dambeeya gidaarka iyo dhaqanka Berlin.
Socdaalka lugta ah ee bilaashka ah ee magaalada Berlin ayaa laba jeer maalintii taga, laga soo bilaabo goobta kulanka ee “Bud”. Tilmaamuhu wuxuu ku sugi doonaa safar socod bilaash ah oo asli ah Berlin wuxuuna ku farxi lahaa inuu kugula taliyo goobaha xafladaha ugu wanaagsan ee magaalada, iyo sida loo sameeyo uga safro magaalada Berlin oo aado magaalooyin kale oo waa weyn oo Jarmalka ku yaal iyo keydka qaranka.
Venice waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu yar Talyaaniga. Si kastaba ha ahaatee, aad ayey u fududahay inaad lumiso markii aad ku meeraysato luuqyadeeda cidhiidhiga ah iyo naqshadaha breathtaking. Socdaalka socodka magaalada ee bilaashka ah ee Venice ayaa kugu hogaamin doona taariikhda, dhaqanka, tahay, iyo dhismaha ku saabsan a 2.5 saacado safar. Hagaha xiisaha leh Simona ayaa kuu sheegi doona wax walba oo magaalada ku saabsan, cunnada, iyo dhibco jacayl.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee booqashada socodka bilaashka ah ee Venice waa Simona, hagaha, iyo jawiga baashaalka. Iyadoo aan loo eegin roob, tirada dadka, waxaad heli doontaa waqti qurux badan oo waxaad heli doontaa xamuul badan oo talooyin ah Cuntada Talyaaniga iyo cabitaanka Eprol ee Venice.
5. Paris Socdaalka Socdaalka Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Paris waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan Yurub, aduunka laguma xuso. Marka Eiffel Tower iyo Avenue des Champs-Elysees ay buuxsamaan dalxiisayaashu, way adag tahay in lagu raaxeysto sixirka goobaha caanka ah ee magaalada. laakiin, socdaal lacag la’aan ah, hagahaagu wuxuu hubin doonaa inaad heli doonto waxyaabaha ugu fiican ee astaamaha lagu yaqaan, iyo qaar kaloo badan oo ku jira dalxiis qaabaysan oo gaar ah.
Paris waxay hoy u tahay dhagaxyo badan oo qarsoon, sidaas darteed tirada dalxiisyada socodka ee bilaashka ahi waa kuwo aan dhammaad lahayn. Waxaa jira booqasho maalin iyo habeen ah, dalxiisyada xaafad kasta, dalxiisyo kariska iyo farshaxanka. Si kastaba ha ahaatee, safarka lugaynta magaalada ugu fiican ee bilaashka ah ee Paris waa dhagaxyada qarsoon iyo booqasho qarsoodi ah oo Paris ah. Tilmaamuhu wuxuu kaa qaadi doonaa marinnada qarsoon ee Louvre, dhismayaasha si loo asteeyo baro sawirro ah, ka fog dadka iyo qalbiga Parisien.
6. Dalxiis Bilaash ah oo Socdaalka Magaalada ee Zurich
Marka lagu daro hagaha weyn ee xiisaha leh, Safarka lugaynta magaalada ugu fiican ee bilaashka ah waa samada cunnada. Maxaad ugu dhex socotaa magaaladii hore iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee Zurich, markaad ku shidan karto shukulaatada Swisska ah ee rabaani ah. Dhadhamiya dhadhaab, wax ka baro soo saarista kookaha oo booqo chocolatiers ugu fiican Yurub sida aad ula dhacsan tahay Lindenhof iyo kaniisada Grossmunster.
Safarka socodka ee Zurich waa 2 saacado dheer oo ka baxa Sabtid kasta Paradeplatz, mana loo baahna in la isdiiwaangaliyo.
Qiimaha Lugano ilaa Zurich
Sida ugu fiican ee lagu bilaabi karo sahaminta Vienna waxay ku jirtaa Soo dhaweynta Vienna ee magaalada socodka bilaashka ah. Qiyaas ahaan 2 saacado waxaad heli doontaa taariikh gaaban oo ah Vienna iyo astaamaha ugu waaweyn, halkaas oo aad ka dhadhamin karto cunnooyinka Viennese ee qadada Marina, mid ka mid ah hagayaasha ugu fiican Vienna.
Laba jeer maalintii, hagaha ayaa kugu sugi doona fagaaraha Albertina oo ah booqasho taariikhi ah oo ku teedsan Vienna.
Qiimaha Tareenka Salzburg ilaa Vienna
Qiimaha Munich ilaa Vienna
Qiimaha Graz ilaa Vienna Tareenka
Qiimaha Tareenka ee Prague ilaa Vienna
Waxa ugu fiican ee ku saabsan safarada socodka bilaashka ah ayaa ah hagaha. In kasta oo booqashooyinka ugu badan ay ku qoran yihiin Ingiriis, Tilmaamuhu wuxuu kuugu soo gudbin doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato magaalada oo ku qoran Ingiriis aad u fiican. Su'aal kasta waa laga jawaabi doonaa waxaadna ku soo afjari doontaa safarka talooyin yaab leh, sheeko xariir, iyo macluumaad ku saabsan magaalada. Waxa labaad ee ugu fiican ayaa ah 7 safarada socodka magaalada ugu fiican Yurub, waa in ay xor yihiin, gaaban iyo barta, oo ku mashquulsan.
Socodka Bilaashka ah ee Socdaalka Magaalada Yurub Su'aalaha
Ma Kuwani Socdaal Socodka Bilaash ah Runtii Waa Bilaash?
Safarada socodka magaalada ee bilaashka ah waxay ku saleysan yihiin talo bixin. Micnaha, uma baahnid inaad boos ka dalbatid safarka lacag-bixinta, laakiin dhamaadka safarka, waa inaad ugu mahadnaqdaa hagaha weyn adigoo calaacalaya.
Immisa Ayaan U Baahanahay Inaan Tilmaamo?
Talooyinku way ku kala duwan yihiin magaalo ilaa magaalo, laakiin celcelis ahaan caarada waa € 5 ilaa € 15.
Sideen ku Heli Tilmaanta?
Tilmaamaha socdaalka socdaalka magaalada bilaashka ah ayaa kugula kulmi doona barta dhexe ee kulanka, oo waxaad ku garan doontaa shaatigooda. Intaa waxaa dheer, waxay u badan tahay inay ku soo baxaan oo ku soo salaamaan.
Ma Jiraan Safarro Lug Ku Socda Oo Luuqado Kale Ah Marka Laga Reebo Ingiriisiga?
Inta badan dalxiisyada socodka ee bilaashka ah ee Yurub waxay ku bixiyaan safarro Ingiriis iyo luqadda maxalliga ah, oo leh safarro yar oo luqado kale ah. Tani way ku kala duwan tahay magaalo ilaa magaalo, iyo hawlwadeenada dalxiiska.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta safarkaaga magaalooyinka ugu fiican Yurub iyo safarada lugta tareenka.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "7 Tours Best Walking Tours In Europe" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ZH-CN in fr / ama / luqadaha de iyo ka badan.
#traveleurope #walkingtours citywalkingtourseurope Europefreewalkingtours tareen safarka travelberlin SafarkaPrague TravelToAmsterdam TravelToParis